Gantry crane - uhlobo kwebhuloho. Ngokungafani yokugcina, ibhuloho zedivayisi ezinwabuzelayo komzila, hhayi ngqo kodwa ngokusebenzisa ukwesekwa ezikhethekile. Sami imizila ngesikhathi ayifakiwe okusezingeni eliphezulu ngokwanele ukuthenga izindonga kanye emhlabathini. The main isici esasenza imishini ezifana Cranes, kuyinto yizinhlobonhlobo yabo.
Kukhona kokubili single-ugongolo nokwakhiwa girder. Noma yimuphi uhlobo imishini kudinga yesondlo little futhi eziqhutshwa kalula ngomunye opharetha. Ukusebenzisa izakhiwo ezifana ibhuloho gantry crane, kuzosiza ukwandisa umkhiqizo ngezinga elikhulu. Ngokusho isipiliyoni isicelo imifanekiso sinjalo izindleko okukhipha ngesikhathi esifanayo zingancishiswa ngu-25%.
Lokhu imishini isetshenziswa ezimbonini eziningi. Ngokulandelayo, uhlu emasimini main kwesicelo:
Emafektri. Kulezi izikhala le Cranes gantry asetshenziselwa ukuthutha ucezu izimpahla, iziqukathi, njll
Vula izindawo izitolo ezimbonini. Kulokhu, okokusebenza babegaxa nokuhamba e izingcezu main komkhiqizo.
Uma ufaka izakhiwo prefabricated - emafektri kanye izakhiwo zezimboni kanye civil.
Esikhathini umkhakha shipbuilding futhi Hydropower.
Kuzo zonke lezi zimo, valve kungahluka kancane ekusebenzeni. Lapho esetshenziselwa ukuhamba kwezimpahla emafektri imishini esetshenziswa ngokwanele ongaphakeme ephakamisa ukuphakama (kufika ku-12 metres). Ukuze ukufakwa izakhiwo prefabricated ku kwezezimboni nakwezolimo isebenzisa somhlangano okhethekile nokwakhiwa Cranes. Ukuze ukuhamba kwezimpahla embonini shipbuilding asetshenziswa onobuhle njengamaphayona akhethekile. Ngokuvamile kuba KKS. Ikhishwe kanye nomklamo engasindi engasetshenziswa ngisho isakhiwo ngabanye. onobuhle ezinjalo ka olubushelelezi okungavamile, futhi ngakho-ke kulula kakhulu ukusebenza.
Ukuyisa cargo ngokwayo Kungasetshenziswa ngamathuluzi ahlukahlukene; izingwegwe, njengoba esinezimpondo kanye esinezimpondo ezimbili, odonsa, nezizenze, engatholwa (ekhethekile amabhakede nezizenze zokulithwala wezimpahla ngobuningi), njll Sam ephakamisa indlela itholakala ngqo kuleli bhuloho, futhi lapho ehamba. Gantry umsebenzi crane kungaba kwenziwe noma nge-opharetha kusuka ngaphambili, ogibele isigxobo noma udoti, noma ngaphandle, kusukela emhlabathini. Esimweni sokuqala, amanye amamodeli kungenziwa ifakwe i-remote control. Kulokhu, ukhiye ekhethekile esetshenziswa ukulawula, ngaphandle okuyinto futhi kufakwe noma akunakwenzeka ukuvala injini.
Kuyinto lolu hlobo kwebhuloho Cranes kubhekwe ethandwa kakhulu futhi asetshenziswa njalo. Iphuzu lapha yilona kalula inhlangano, ezokuthutha kanye nokuphathwa. Ngaphezu kwalokho, lo mshini akufanele kube ebiza kakhulu, futhi petrol kuncane kakhulu. Iningi kulula ukugcina olulodwa-ugongolo gantry Cranes. igama okunjalo ezithakazelisayo, cishe abakhethiwe lezi onobuhle ngenxa yo- efana idivayisi ubudala ukusika izinkuni. Phakathi kwemilenze emibili kuyinto ngebhuloho, futhi eyodwa noma ngaphezulu izinqola zokudla ezihambayo kuso.
Heavy zokuthutha impahla yempi izindiza Il-76TD: ezibekiweko lobuchwepheshe
Orange County Resort Hotel 5 * (Turkey, Kemer): izithombe kanye nokubuyekeza